Sida loo Xakameeyo Tayada Shirkaddayada | JIAWEI
Waxaa jira soo saareyaal warshad dabiici ah oo aad u badan oo ku dhex jira suuqa. Sidaa darteed, shuruudaha tayada adag ayaa looga baahan yahay inay ka soo baxaan soo saareyaal badan. Haddaba aan soo bandhigno wax ku saabsan kantaroolka tayada ee shirkadeena:
Marka hore: Alaabada ceeriin ee la xushay: walxaha caagga ah
(1) Dhamaan agabyada cusub ee la keeno PE 80 80 + alaabada dib loo soo ceshay fasalka 10% + agabyada caddeynta waxyaabaha qarxa 10% waxaa loo isticmaalaa wax ka badalka granulation-ka si loo kordhiyo xawaaraha midabka, adkeynta iyo ka hortagga gariirka.
(2) Alaabada ceyriinka ee alaabada PEVA waxay xaqiijineysaa EVA50% iyo PE50%, si loo hubiyo jilicsanaanta iyo jilitaanka caleemaha, iyo dhumucdeedu waxay ka sarreeyaan 10% badeecadaha guud ee suuqa si loo hubiyo dareenka.
(3) Jinka ku saleysan biyaha bey'adda u fiican ayaa loo isticmaalaa habka daabacaadda caleenta, iyo midabka soo dejinta waxaa loo isticmaalaa midabka si loo hubiyo in heer sare oo jilitaan midab leh aan isbeddel midab lahayn.
(4) A + C xoojinta sanduuqa ganacsiga shisheeye ee gaarka ah ee caadiga ah waxaa loo isticmaalaa baakadaha kartoonada.
(5) Alaabada ceyriinka ah ee alwaaxda sida alwaaxyada alwaaxyada iyo xaabada alwaaxda ayaa dhammaantood laga sameeyay alwaax adag iyo agab hilib qaro weyn leh, oo la iibsaday oo horay loo sii dhigay, si dabiici ah loo qalajiyey muddo 3-6 bilood ah ka dibna lagu qalajiyey heerkulka dhexdhexaadka ah 7-10 maalmood. Marka dheriga la dhammeeyo ka dib, qalaji muddo 5 maalmood ah si loo hubiyo in uusan dillaacin, dixir, caariyaysi ama qoyaan.
Midda labaad: Qalabka cusub: Ilaa hadda, 70% qalabka ayaa la casriyeeyay.
(6) Laba qaybood oo ah qalab si toos ah loogu daabaco foliar qalab si wax ku ool ah loo xalliyo dhibaatooyinka wax soo saarka iyo kala duwanaanta midabka.
(7) Qadar badan oo ah duritaanka xoqidda ayaa loo isticmaalaa booska lafta ee jirridaha iyo caleemaha si loo hubiyo in jirridaha iyo caleemaha aan la gaarin oo aan la jebin.
(8) Shirkadda waxay maal gelisay ku dhawaad ​​500,000 si ay u aasaaso aalad daaweyn gaas si loo hubiyo in geedi socodka waxsoosaarka oo dhan la waafajiyo shuruudaha ilaalinta deegaanka ee qaran.
Saddexaad. Habka Wax Soo Saarka:
(9) 80% shaqaalaha safka hore waxay ka badanyihiin seddex sano jir. Kartida iyo xirfadda shaqaalaha hore waxay xaqiijinayaan in alaabada la dammaanad qaaday bilowga wax soo saarka.
(10) Dhibaatada qaabka dhirta, macaamiisha badan ayaa u maleynaya in alaabtu aysan sax aheyn, maxaa yeelay geedka qaab ahaan uma eka qaab ahaan kadib qaabsocodka. Xarkaha cirifka dhabta ah ee loo yaqaan 'bamboo bamboo dhab ah' iyo alaabada taxane ah ee alwaaxyada geedaha ah, waxaan geleynaa geedo geedka ka dib markaan beero dheriyo aan alaabteenna ka dhigno mid qurux iyo qurux leh. Looma baahna macaamiisha inay dib u furaan qaabka caleen, si looga fogaado cabashooyinka macaamiisha aan muuqaal wanaagsaneyn inta lagu jiro nidaamka iibka.
Waqtiga boostada: Meey-29-2020